Ifriji Deodorizer kunye neFreshener -Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
I-FAUCI Fridge Deodorizer kunye neFreshener FAQ
Ungayisebenzisa njani le mveliso?
Impendulo: Susa ifilimu yealuminium yephakheji kuqala, kwaye ungene umoya imizuzu emi-3. Ngokobungakanani besikhenkcisi kwaye ulandela inkcazo yemveliso, galela zonke okanye inxenye yezixhobo zegranular kwimbiza yesilinda enobubanzi obuncinci. Emva koko, beka isiciko sekomityi yesilinda enobubanzi obukhulu kumzimba webhotile, ucofe uqinise kude kubekho isandi esithi “cofa”, kwaye ujonge ukuba ingaba yonke imveliso ibotshelelwe ngokuqinileyo na. Ungayibeka kwifriji kwaye uqalise ukuyisebenzisa.
Emva kweeyure ezi-5, vula ifriji kwaye amavumba omosheka kunye namavumba aya kuthi shwaka. Ukuba kusekho ivumba elomeleleyo lesibulala-ntsholongwane ngeli xesha, ungasithatha isitya, ubambe isiciko esingaphezulu ngesandla esinye usitshixe kancinane, ngelixa ucofe indawo esezantsi yebhotile ngesinye isandla, uyijijise ngapha nangapha kumgca othe nkqo ngapha kobubanzi kangangezihlandlo ezimbalwa (ungacofisi ezantsi kwaye ujikeleze) ukwahlula isiciko kumzimba wendebe. Ngokwemeko yakho, nciphisa izinto eziyimbudumbudu uze ubambe isiciko uze usibeke kwifriji kwakhona.
Igcina njani le mveliso intsha kwaye isusa deodor?
Impendulo: Eyahlukileyo kwisigqubuthelo esiqhelekileyo sokugubungela okanye iimveliso zokufunxa ivumba, i-FAUCI Fridge Deodorizer kunye neFreshener isebenzisa izixhobo ezakhelweyo zenzalo ukukhupha ngokubonakalayo i-gaseous sterilization factor kunye nokusasaza kwifriji. Phantse zonke iintlobo zebacteria kunye nezibumba ngaphezulu ziyabulawa, nangaliphi na ixesha ukuthintela ukuzala kunye nokuzala kweebhaktiriya ezintsha kunye nokubumba, ukuze kufezekiswe ukulondolozwa kokutya kunye nokususwa kwamavumba amabi kunye nevumba.
I-Chlorine dioxide sisizukulwana esitsha esamkelwa kwilizwe liphela esisebenza ngokufanelekileyo kunye nesibulali-ntsholongwane esikhuselekileyo. Njengolondolozo olugqwesileyo, isetyenziswe ngokubanzi ekulungiseni ukutya, ukupakishwa, ukugcinwa kunye nokuthuthwa;
Uhlobo lwe-ROS olusebenzayo lweoksijini lubhekisa kumasuntswana eoksijini asebenzayo anjengehydroxyl free radicals kunye ne peroxy free radicals, ezingqinelanayo nezinto eziphambili ezibulala iintsholongwane emzimbeni womntu, kwaye ziveliswa kukubola kunye nokwahlulwa kwamanzi. Ukusebenza kwe-disinfection ukusebenza kwala masuntswana eoksijini asebenzayo aphezulu kunalawo acocekileyo erhasi yeklorini dioxide. Nokuba kunzima kakhulu ukubulala uhlobo lweebhaktiriya ze-endospores ezikhoyo eMhlabeni, iROS ingazisusa ngoko nangoko. (I-ROS oksijini esebenzayo inemisebenzi ephezulu kunye nobomi obufutshane.
I-COVID-19 inokuphila ngokutya ixesha elide. Ngaba le mveliso inokubulala i-COVID-19 kunye neenguqu zayo?
Nangona kunjalo, ngoFebruwari 4, 2020, iKhomishini yezeMpilo yeSizwe yase China yakhupha "Isaziso kuLuhlu oluNgxamisekileyo loLuhlu lweeNtsholongwane ezithile ngexesha loThintelo noLawulo lweNtsholongwane yeNtsholongwane kaGawulayo yaseCoronavirus". ; NgoFebruwari 19, 2005, iKhomishini yezeMpilo yeSizwe yase China yakhupha "Izikhokelo zokuSetyenziswa kweeNtsholongwane zokubulala iintsholongwane" ukuphendula lo bhubhane, owawudwelisa izibulali-ntsholongwane ezahlukeneyo ezazisetyenziselwa ukubulala iCoronavirus entsha. Kuluhlu, i-chlorine dioxide yokubulala iintsholongwane ichazwe njengefanelekileyo ukubulala iintsholongwane.
Ngale ngxelo isemthethweni ingentla, ngokungangqalanga ibonisa ukusebenza kwale mveliso ekubulaweni kweCoronavirus entsha, kwaye kwangaxeshanye, iROS ine-disinfection ufanisi ephezulu.
Impendulo: Uninzi lweemveliso ezifanayo kwiimarike zahlulahlulwe kakhulu kuhlobo lokufunxa ivumba kunye neentlobo zokugubungela ivumba. Ezi mveliso azinakusombulula unobangela wesizukulwana esiqhubekayo kunye nokuqokelelwa kwevumba elikhethekileyo kunye nevumba kwifriji-- ukukhula kweebhaktiriya zokutya kunye nokuvunda. Ke ngoko, ukongeza ekusweleni kumandla okuphelisa ivumba kwaye ube nefuthe lexeshana elifutshane, akukho siphumo sokulondolozwa kutsha.
Kukwakho nolondolozo lwefriji yokucoceka kunye neemveliso zokuhambisa deodor eziqukethe i-hypochlorous acid kunye ne-chlorine dioxide fungicides kwintengiso, kodwa umda kwitekhnoloji unika iwindow emfutshane yokusebenza. Kwangelo xesha, i-hypochlorous acid ineqondo elithile lobutyhefu, kwaye i-chlorine dioxide sterilization iyodwa ayisebenzi kakuhle kuneemveliso zethu, ngenxa yoko kufuneka uxinzelelo oluphezulu. Ukuphakama kakhulu kwe-chlorine dioxide yoxinaniso ayisiyongcono.
Izinto ezakhelwe ngaphakathi ze-FAUCI AAPG kwi-FAUCI Fridge Deodorizer kunye neFreshener yamkela itekhnoloji ye-oxygen esebenzayo ye-oksijini kunye ne-bactericidal factor itekhnoloji ekhutshwa ngokuzimela ngokuzimeleyo eyenziwe yinkampani yethu, enokuthi icothise kwaye ikhuphe ngokuzinzileyo nangokukhuselekileyo nangokufanelekileyo i-gaseous chloride dioxide molecule kunye ne-ROS oxygen esebenzayo ion ixesha elide.
Dis Inqaku lokubulala iintsholongwane kwi-FAUCI Fridge Deodorizer kunye neFreshener yiglass ye-chlorine dioxide kunye ne-ROS esebenzayo yeoksijini, enokusebenza kakuhle kwe-disinfection kunye nokhuseleko; Ngelixa ezinye iimveliso zingenayo i-ROS oksijini esebenzayo, kwaye kunokubakho i-gaseous hypochlorous acid, iklorine kunye nezinye izinto eziyityhefu ezingavunyelwanga kukunxibelelana kwabantu, ezingaphelelanga nje ekusebenzeni kakuhle kwe-disinfection, kodwa zikwanomngcipheko wokhuseleko;
② I-FAUCI Fridge iDeodorizer kunye neFreshener ineziphumo eziqhubekayo kwiinyanga ezi-3, ngelixa ezinye iimveliso zikwiinyanga ezi-1-2 kuphela.
Ngokuphathelele kwezinye iimveliso ezisebenzisa i-ozone, eyona ngxaki iphambili kukuba i-ozone inetyhefu, iyacaphukisa kwaye iyonakalisa imeko-bume. Iimveliso zethu azivelisi nayiphi na i-ozone.
Ngaba le mveliso ikhuselekile ukuba ingasetyenziselwa umzimba womntu kunye neemveliso zokutya?
Impendulo: Inqanaba le-ROS yeoksijini esebenzayo eveliswe kumphezulu wento eyakhelwe-ngaphakathi ye-FAUCI AAPG yale mveliso iyafana neyona nto ibaluleke kakhulu nengalinganiyo emzimbeni womntu obulala iintsholongwane kunye neebhaktiriya. Ikwayinto yendalo kwaye ikuluhlu lomkhondo. Inenzuzo kwaye ayinabungozi emzimbeni womntu, kwaye ayinayo ityhefu kwaye ayinabungozi kukutya;
Kwangelo xesha, i-FAUCI Fridge Deodorizer kunye neFreshener (eyakhelwe ngaphakathi kwi-FAUCI AAPG izinto) iphumelele uvavanyo olufanelekileyo lwe-CMA / CNAS: isiphetho sovavanyo lokutyhefuzela sokutsala inhalation siboniswa ukuba asiyityhefu; ukuvavanywa kweseli micronucleus kuko konke okungalunganga, oko kuthetha ukuba akukho kuguquka kweseli kwaye akukho tyhefu yemfuza;
Loluphi uvavanyo kunye nokuqinisekiswa kwesi mveliso ngoku?
Impendulo: Iimveliso zethu zilupasile uhlolo olufanelekileyo lwe-CNAS ebhalisiweyo yomzimba wokuqinisekisa, kwaye yafumana isatifikethi se-EU CE-ROHS, isatifikethi se-FDA, isiqinisekiso seMSDS, iiNgxelo zoVavanyo lweNtsholongwane, iiNgxelo zoVavanyo lweNtsholongwane ze-H1N1, iiNgxelo zoVavanyo lwe-Staphylococcus Albus, zoLuntu Iingxelo zovavanyo ze-Enterovirus 71, iiNgxelo zovavanyo ze-Escherichia Coli.
Ngawaphi amanyathelo othintelo ekusetyenzisweni kwemveliso?
Impendulo: Qaphela ukuba ungayenzi imveliso imanzi. Ngokukodwa, kubalulekile ukuthintela ukunxibelelana nempahla, ulusu, kunye nentsimbi xa uvezwa emanzini kuba amanzi aya kukhawulezisa ukubonwa kokusebenza kwempahla. Iimveliso ezintsha zinokuthengwa kwakhona ngokufanelekileyo;
MaterialIzixhobo zokubulala iintsholongwane ezakhelweyo azinakutyiwa;
ShouldAkufanele ixutywe nezinye izinto ezibulala iintsholongwane zealkali okanye izinto zezinto eziphilayo.
Xa ibhegi etywiniweyo ingavulwanga, ibhegi inexinaniso oluphezulu lwezixhobo. Emva kokuvula ibhegi kwaye ukhuphe imveliso, yenza i-ventilate imizuzu emi-1 ukuya kwemi-5. Emva kokuba ivumba linciphile, inokusetyenziswa ngesiqhelo.